साम्रागी भन्छिन्– म स्क्रिप्ट पढ्छु, पारिश्रमिकको ‘डिल’ आमाले !
२१ असार, २०७५
काठमाडौं । नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा सबैभन्दा सफल अभिनेत्रीको रुपमा साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाह दरिएकी छन् । झण्डै आधी दर्जन चलचित्रमा अभिनय गरेकी साम्राज्ञी हाइ डिमान्डेड हिरोइनका रुपमा समेत स्थापित छिन् । उनको अभिनय रहेका प्रदर्शनमा आएका चलचित्रले बक्स अफिसमा सफलता हात पार्दै आएको पाइन्छ ।
तर, उनीमाथि पत्रकारले सोध्ने एउटै प्रश्न हुन्छ– तपाई घमण्डी र भाउ खोज्ने हिरोइन हुनुहुन्छ हो ? यस विषयमा साम्राज्ञी सहज जवाफ दिन्छिन्– ‘काममा व्यस्त भएपछि अरुलाई झुक्याउनु र अलमलमा पार्नु हुँदैन । त्यसैले पनि निर्माता निर्देशकले यस्तो बुझ्नुभएको हो । बजारमा गलत हल्ला फिजिएको हो । तर, काममा म सधैँ सिरियस हुन्छु ।’
डेब्यु फिल्म ‘ड्रिम्स’बाट सफलताको सिढी चढेकी साम्राज्ञी अहिलेकी सर्वाधिक ’डिमाण्डेड’ अभिनेत्री हुन् । उनलाई लिएपछि निर्माताहरु आफ्नो लगानी सुरक्षित हुन्छ ठान्दछन् । ‘ड्रिम्स’ पछि ’ए मेरो हजुर २’ बक्सअफिसमा चम्किएपछि उनको चर्चा झन चुलिएको हो । उनका दुई चलचित्र इन्टुमिन्टु लण्डलनमा र कायरा प्रदर्शनको पर्खाइमा छन् ।
चलचित्र ‘कायरा’मा आर्यन सिग्देलको अपोजिटमा देखिएकी साम्राज्ञीले यो चलचित्रबाट १० लाख पारिश्रमिक बुझेकी थिइन् । यसअघि यो रकम नेपालका कुनै पनि नायिकाले एक फिल्मबाट बुझ्न सकेका थिएनन् । आर्यनले साम्राज्ञीको स्टारडमलाई मध्यनजर गर्दै उक्त रकम सहजै दिए ।
यो फिल्म बक्सअफिसमा सफल भए साम्राज्ञीले हिट फिल्ममा ह्याट्रिकसँगै पारिश्रमिक पनि थप चर्काउने पक्का छ । ‘कायरा’ साउन १८ गतेबाट रिलिज हुँदैछ । पहिलो पटक चकलेटी हिरो आर्यन र अहिलेकी ‘हट केक’ साम्राज्ञीको जोडी पर्दामा देखिन लागेका कारण यो फिल्मप्रति दर्शकको चासो अलि बढी नै छ ।
हालै काठमाडौंमा गरिएको एक कार्यक्रममा उनले आफ्नो पारिश्रमिकका विषयमा पनि खुलाएकी थिइन् । उलने आफ्नो पारिश्रमिकको डिल सबै आफ्नी आमाले गर्ने र कथावस्तु चित्त बुझ्दो भए मात्र आफू चलचित्रमा अनुबन्धित हुने बताएकी थिइन् । साम्राज्ञीकी आमा नेहा राज्यलक्ष्मी शाह हुन् । उनी गायिकाको रुपमा परिचित छिन् । साम्राज्ञीलाई आमा बिना निकै कम देख्न पाइन्छ । उनी जहाँ जान्छिन् त्यहाँ आमाको साथ छुट्दैन । त्यसैले धेरैले उनीहरुलाई आमा–छोरी भन्दा पनि साथीको संज्ञा दिने गरेका छन् ।